Weedmaps Weapma-ka Dib-u-eegista Cannabis Waxay Dadweynaha Ugu Baxaysaa Qiime dhan $ 1,5 Billion • Dawooyinka Inc.eu
Shirkadda waalidka ee Weedmaps ayaa dadweynaha u soo bandhigi doonta qiime dhan $ 1,5 bilyan, ayay shirkaddu sheegtay Khamiistii. IPO waxay la socotaa horumar togan iyo kobaca la filayo ee shirkadaha marijuana ee Mareykanka sanadaha soo socda.
Baahida loo qabo xashiishadda ayaa sii kordheysa iyadoo dad badan ay guryahooda ka shaqeeyaan, gobollo badan ayaa sharci ka dhigaya isticmaalka xashiishka, Golaha Wakiilada Mareykanka ayaa u codeeyay a biil lagu xukumayo xashiishadda heer federaal.
Waxaa la aasaasay 2008, WM Holdings waxay ka shaqeysaa barxadda Weedmaps iyo WM Business, oo ah barnaamij software ah oo ay adeegsadaan tafaariiqlayaasha xashiishka iyo noocyada. Shirkadda ayaa sheegtay in dakhligeeda ay ku korodhay heer sanadle ah 40% shantii sano ee la soo dhaafay waxayna ku socotaa wadadii ay ku gaari lahayd $ 160 milyan oo dakhli ah iyo $ 35 milyan oo EBITDA ah sannadkan.
Ka dib heshiiska, oo la filayo inuu soo galo dakhliyo gaaraya $ 575 milyan, shirkadda isku dhafan waxaa hogaamin doona WM Holding Chief Executive Officer Chris Beals waxayna kusii jiri doontaa liiska Nasdaq, ayay shirkaddu tiri. Scott Gordon, oo ah madaxa shirkadda Silver Spike SPAC, ayaa ku biiri doona guddiga shirkadda isku dhafan.
Silver Spike waa Shirkad Ujeeddo Gaar ah U Qaadashada (SPAC), oo lacag ku uruurisa bixinta bilowga ah ee dadweynaha (IPO) iyadoo ujeedadu tahay inay iibsato shirkad gaar loo leeyahay. Shirkada lala wareegay waxay markaa kadib umuuqandoontaa midowgii dartiis waxayna bedel u tahay nidaamka IPO-ga soo jireenka ah. SPACs waxay u muuqatay waddo caan ku ah suuqa saamiyada ee shirkadaha gaarka loo leeyahay maadaama lagu dhammeyn karo si ka dhaqso badan IPO waxaana jira hubaal badan oo ku saabsan lacagaha shirkad ay aruurin doonto. Silver Spike waxay aruurisay $ 250 milyan intii lagu jiray Agoosto 2019 IPO oo ku taal Nasdaq iyadoo xooga la saaray iibsashada ganacsiga xashiishka.
Ka aqri faahfaahin dheeraad ah, iyo kuwa kale Nasdaq.com (Xigasho, Iyo)
cannabiskaydka xashiishkamaaliyad ahaanMaraykanka
Waa rasmi: Isticmaalka madadaalada ee xashiishadda ayaa hadda sharci ka ah Gobolka New York
Toddobaadkii hore, Guddoomiyaha Andrew Cuomo wuxuu saxiixay sharci lagu mamnuucayo xashiishadda madadaalada ee ku taal gobolka New York ...
Cilmi baaris ayaa muujisay in CBG ay waxtar u leedahay daaweynta calaamadaha kala duwan. Tusaalooyin ...
GroenLinks waxay dooneysaa in ay sharciyeyso ecstasy
GroenLinks wuxuu rabaa in soosaarka ecstasy uu hoos yimaado jihada dowladda, sidaas darteedna ...